राप्रपामा रेखा थापाको समर्थन राजेन्द्र लिङ्देनलाई
काठमाडौं । कलाकार रेखा थापा कुन पार्टीमा आवद्ध छिन् भन्ने चासो बढिरहेका बेला उनी राप्रपामै रहेको संकेत दिएकी छन् । बिहीबार राप्रपा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देनले उम्मेद्वारी घोषणा गरे ।
जमलको एलोप्यागोडा होटेलमा भएको उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा सहभागी भएर रेखाले आफू लिङ्देनको पक्षमा रहेको सन्देश दिएकी छन् ।
अध्यक्षत्रय कमल थापा, पशुपतिशमशेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई टक्कर दिँदै युवा नेताहरूको दरिलो समर्थनमा लिङ्देनले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
युवा नेतासहित धमलशमशेर राणासहित नेताहरूको समर्थन प्राप्त गरेको लिङ्देनलाई अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशकसमेत रहेकी रेखाले पनि समर्थन जनाएकी हुन् ।
राप्रपाको महाधिवेशन १५–१७ मंसिरमा हुँदै छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)को केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले विधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । पार्टीको आसन्न एकता महाधिवेशनलाई भव्य र सफल बनाउन नेता तथा कार्यकर्ताबाट आएका सुझावलाई समावेश गरी
काठमाडौं । कलाकार रेखा थापा कुन पार्टीमा आवद्ध छिन् भन्ने चासो बढिरहेका बेला उनी राप्रपामै रहेको संकेत दिएकी छन् । बिहीबार राप्रपा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देनले उम्मेद्वारी घोषणा गरे । जमलको एलोप्यागोडा
राप्रपा अध्यक्षत्रयविरुद्ध लिङ्देन र राणाको टक्कर
काठमाडौं । राप्रपा अध्यक्षत्रय कलम थापा, पशुपति शमशेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीविरुद्ध राजेन्द्र लिङ्देन र धवलशमशेर राणा समूहले टक्कर दिएको छ । पार्टीको महाधिवेशन आउन एक साता बाँकी रहेका बेला
राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष, धवलशमशेर महामन्त्रीसहितको प्यानल बन्दै
काठमाडौं । राप्रपा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देनसहितको उम्मेदवारी घोषणा गरिँदै छ । बिहीबार लिङ्देनले अध्यक्षमा उम्मेदवारीमा घोषणा गरेका हुन् । उनको प्यानलबाट महामन्त्रीमा धवलशमशेर राणाको उम्मेदवारी घोषणा गरिन लागिएको छ । ‘बिहीबार